Enwere m ike ịchọpụta ihe kacha achọ ihe na Amazon?
Azịza dị mkpirikpi bụ ee, i nwere ike. Ma ọ bụghị ihe siri ike ịchọta ihe ndị kasị achọpụta na Amazon iji tinye ha na ndepụta gị ma n'ikpeazụ mezuo nchịkọta niche ahụ zuru ezu. Ann ị chọrọ bụ ịnweta ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nkwụsịtụ nkwụsị nke na-egbochi mkpa gị niile maka nchọpụta asọmpi na nyochaa usoro mmemme arụmọrụ na Amazon. Ma gịnị ma ọ bụrụ na m ekwu na ọbụna n'elu na-egosipụta nyocha na ngwaọrụ nchịkọta bụ nanị akụkụ dị nta nke nnukwu mgbagwoju anya nke nwere ihe ọ bụla ahịa ahịa ka na-ekpuchi maka òkè ọdụm nke ndị ahịa na-ere n'ebe ahụ - latin america travel specialists. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga - egosi gị nhọrọ ụfọdụ kwesịrị ekwesị iji nyere gị aka ịchọpụta ihe kachasị achọpụta na Amazon ma nweta echiche na-emetụ n'ahụ, atụmatụ niche, yana ụdị omume na ịzụ ahịa nke nwere ike ịmetụta arụmọrụ gị na ụlọ ahịa ahụ juru ebe niile .
Jungle Scout - ngwá ọrụ a bụ ike kachasị mma iji mee nchọpụta nke ndị kasị achọ ihe dị na Amazon. Kedu ngwaahịa ndị dị ugbu a n'elu mkpa ndị ahịa? Kedu ngwaahịa ndị kasị achọ ihe na Amazon? Kedu niche na-enweta n'ịkwado ewu ewu? Kedu ihe ị ga-eme karịa ndị na-asọmpi kachasị gị? Enwere mmehie na mkpebi ọjọọ ndị ndị ahịa gị na-ere ahịa na-eme ugbu a ka ị ghara ịbanye mgbe ahụ? Kedu esi achọta isi ihe ntinye ego zoro ezo ugbu a na ihe ndi nwere ike na ere? Onye na-achụ nta anụ ọhịa Jungle bụ kpọmkwem ngwá ọrụ iji nye gị azịza nile dị mkpa iji nọrọ na mpi asọmpi na-eme ihe ike ma buru ụzọ na Amazon.
Idebe Ahịa na Track
Keepa - bụ ihe kachasị mma ị ga - esi nweta ihe ị ga - eji nweta ihe ọ bụla a chọrọ na Amazon. ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme iji nweta ihe ndị bụ isi na-akwọ ụgbọala nke ụlọ ahịa ecommerce na azụmahịa mbupu-mbupụ. A na-akwado usoro a na-arụ ọrụ nke ọma na 11 mba dị iche iche na-abịa na nsụgharị asụsụ dị iche iche iji nyere gị aka iji ọnụahịa tụnyere, ịkọ ọkwa ọnụahịa, ọkwa ịchọta, oke ego akụkọ ihe mere eme, yana ihe ọhụrụ gbasara Amazon nke dị gị mma .
Na-aga Nledo na ndị asọmpi maka Keywords
Akara - bụ isiokwu dị elu na-emepụta ihe. Jiri ya iji chọpụta ihe kachasị achọpụta na Amazon, dịka isiokwu ndị kachasị elu nke ndị na-asọmpi gị ga - - ma emeela ya. Ngwá ọrụ a bara uru maka ịmechapụ ntanetị Pay-Per-Click ya na ihe kachasị mma, yana igosi gị na ị nwere ike ịkwado niches na oke ego bara uru na oke mpi egwu. Tụkwasị na nke ahụ, Ọhụụ gosipụtara na ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ịbịakwute nchịkọta ihe ize ndụ na ihe niile na-atụ egwu iji chọpụta ahịa gị na akụrụngwa gị, ma ọ̄ bụ ọmụmaatụ, nwee atụmanya doro anya maka uru mgbe FBA gasịrị.